Boric acid maka acne na ihu: enwere m ike ịkụ ha ọkụ na ntinye ngwọta 3%, gịnị bụ ntụziaka maka iji mee ihe, na -eme mmanụ salicylic na enyemaka chloramphenicol? - Maka onye nnabata - 2019
Aro maka ojiji nke boric acid site na otutu
A na-eji acid (orthoboric) mee ihe n'ịgwọ ọrịa dịka antiseptic. Ọ bụ nke na-adịghị ike acid, na-enweghị uto na isi ísì, na-adịghị mma soluble na mmiri. Anyị maara ya dịka mmanya na-aba n'anya - ihe ngwọta ethanol 70% na ọdịnaya acid boric acid nke 0.5-3%.
Maka ọgwụgwọ acne na acne, ọ bụghị naanị ihe ngwọta mmanya ka a na-eji mee ihe, kamakwa mmanụ mmanu, yana "ndị na-ekwu okwu" dị iche iche - nkwụsịtụ, nke nwere ọ bụghị nanị ọgbụgba acid, kamakwa ọgwụ ndị ọzọ na-agwọ anụ ahụ.
Tụlee ma ha na-enyere aka ma ọ bụ na ha nwere ike imerụ ahụ, na otu esi etinye ihe ndị ahụ n'ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Tinyere ego ha na ebe ha na ere.
Ọdịdị nke nke a na ndị ọzọ na-agwọ ọrịa
Ego ole na ebe ịzụta?
Mgbe na ihe ị ga-atụ anya nkwụpụta ya?
Ihe ojoo nwere ike ime
Mgbochi nke rashes na ihu
Ọgwụ ọjọọ nke ime ihe yiri ya
Enwere ike ikpo oku na ngwá ọrụ a?
Ọ bụrụ na obere, pimples ọhụrụ na-acha ọcha purulent isi na ihu, cautery ga-irè. Acid ga-egbu nje bacteria, mee ka ọ ghara ikpo ọkụ ma kpoo akpụkpọ anụ. Ma, a ga-eji usoro a mee ihe na pimples ọhụrụ. Ọ bụrụ na e nwere nnukwu ihe nrụgide, mgbe ahụ na-ere ya ọkụ. Ọ dị mkpa iji gbasaa ọdịnaya nke pimple ma wee jiri ya na-egbu ya.
More boric acid agaghị enyere aka na pores na abụba. Ọ ga-amụba ma hichaa pores ahụ, ma a ga-ejikwa ájá na akpụkpọ anụ mee ha ọzọ.
Ọ dị mkpa! Ihe otutu nwere ike ibu ihe akaebe nke oria ojoo, obughi nani ihe ozo. Ya mere, mmanya na-aba n'anya na-apụghị ịgwọ ọrịa na akpụkpọ ụkwụ.
Boric acid nwere mmetụta antiseptik, na-egbu ụmụ nje na nje bacteria, na-egbochi mmepụta ha. Ọ gaghị adaba uru ya na iji ya eme ihe ugboro ugboro, dịka ọgwụ ndị ọzọ dabere na ọgwụ nje.
Na mgbakwunye na acid boric, a na-eji ụzọ ndị ọzọ agwọ agwọ. Ndị kasị ewu ewu bụ chloramphenicol na salicylic acid. Site na ngwakọta nke ihe ndị a dị atọ, a kwadebere nkwụsị maka ịgwọ anụ ahụ.
Ụdị akpụkpọ ahụ Oge ojiji Action Ụdị
Mmiri salicylic Naanị maka mmanu mmanu, agwakọta Kwa ụbọchị, izu ụka 2-3
Kpoo nje bacteria.
Wepụ mbufụt ma na-enwu gbaa.
Wepụ stains na akpụkpọ ụkwụ ochie.
Boric acid Maka ihe niile Kwa ụbọchị, izu ụka 2-3
Na-eme ka mbufụt.
Na-ehicha akpụkpọ ahụ.
Levomycetin Maka ihe niile 7-10 ụbọchị
Wepu ihe otutu.
Mmiri salicylic siri ike, ma ọ gaghị adabara na akpụkpọ anụ. A gaghị eji Levomycetin mee ihe ruo ogologo oge. Boric acid bụ n'efu site na ụbụrụ ndị a.
A na-amachibido Boric acid iji mee ihe maka ndị ime na ndị na-agba umuaka, ụmụ ọhụrụ laghachi n'afọ 1987. N'ịbịakọta n'ime anụ ahụ, ọgwụ ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-esi n'ahụ ya pụọ ​​ma nwee ike ibute nsị.
N'ezie, maka onye toro eto na-ahụ ike, iji ọgwụ a eme ihe n'ụzọ dị mma agaghị emerụ ahụ. Ọ bụ naanị ihe dị mkpa ịghara ikwe ka ihe ngwọta na-abanye n'ahụ akpụkpọ anụ nke anya na ọnụ, ọ bụghị iji mee ka akụkụ ahụ dị oke, na-etinye nanị obere ọmụmụ ihe ma dịka ntuziaka ahụ si dị. Ị gaghị enwe ike iji boric acid, ndị nwere nkwarụ ọrụ aka.
Enwere ike iji ụmụaka mee ihe karịa otu afọ., ma nke mere na dose ahụ, n'agbanyeghị oge ojiji nke mmanu mmanu ma ọ bụ ngwọta, abụghị ihe karịrị gram 2.
A pụghị iji ọgwụ na-ahụ maka ahụ ike mee ihe na akpụkpọ ara. Ndị nne na - atụ anya - ọ ghaghị ịhapụ inye ọgwụgwọ a, ma ọ bụrụ na enwere nsogbu na akpụkpọ ahụ, lebakwuo anya na ọgwụ ọjọọ. A na-enye ndepụta nke usoro ọgwụgwọ ọzọ maka ihe otutu na njedebe nke isiokwu a.
A na-ere mmanụ, ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya na "speaker" na pharmacies. Ma ọ bụrụ na eresị ngwaahịa abụọ mbụ na-enweghị ọgwụ, nkwadoro, dịka iwu, edoziri onwe gị n'otu n'otu maka ụlọnga nke ọkachamara. A ghaghị inye ọgwụ ndị dị otú ahụ nanị n'ụsọ ọgwụ ndị obodo.
Nke a bụ ọgwụ ndị Moscow na-ere ugbu a maka ego dịka akụkụ nke mmiri acid.
Ọnụ ego a na-eri ihe ngwọta mmanya dị pasent 3 maka pasent 25 dị site na 9 ruo 36 r. dabere na onye na-emeputa na ntinye aka. Ụdị olu yiri ụbụrụ 5% na-efu 30 - 50 p.
Ọnụahịa nke mmiri ara ehi na-adabere n'ụgwọ ndị ọgwụ ndị ọzọ gụnyere. A ghaghị iburu n'obi na onye ọrụ ọgwụ a na-arụpụta ọrụ gị kpọmkwem. Ya mere, ha dị oke ọnụ, mana ha dị ọnụ ala.
Njikere nkwusioru na trichopol ga-eri ihe dị ka 180 p.
Amụrụ mmiri mmiri resorcin ("Resorcin") - 350 p.
Mmiri ara ehi - 350 p.
Ntị! Ndị na-ekwu okwu "onwe ha" ga-esi dị ọnụ ala karịa 50-60%.
Nkwenye nke anụ ahụ mara mma ma dị mma bụ iji ọgwụ ahụ eme ihe n'ụzọ ziri ezi. N'ihi na oge ole na ole ka eji ọgwụ eme ihe na-adabere na njedebe ikpeazụ. A na-eji ngwaahịa niile eme ihe dị ọcha.
Nkwụsịtụ ọ bụghị nanị na-emeso nsogbu akpụkpọ anụ, kama ọ na-eme dị ka prophylactic iji gbochie ọdịdị nke ihe otutu.
N'ezie: Izu 2.
Ugboro ole n'ụbọchị: 1 oge na mgbede.
Ikwanye ọgwụ ma tinye ntakịrị tụlee na mpe akwa.
Ghichaa ihu, ma e wezụga maka ebe dị anya na egbugbere ọnụ, na-ekpochapụ ngwaahịa ahụ n'ime akpụkpọ ahụ.
Hapụ na ihu ruo mgbe ịsacha ya.
N'oge a na-agwọ ọrịa, akpụkpọ ahụ na-aghọ mmetụta nke ìhè ultraviolet.
Maka ịsacha na ngwa buru mmanya mmanya na-aṅụ 3%.
Ọ bụ iji ehichapụ akpụkpọ ahụ kwa ụbọchị ka ọnọdụ ya dị mma.
N'ezie: 3-5 ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị kpochapụ akpụkpọ ahụ karịa otu ugboro, akpọrọ akpụkpọ ahụ.
Oria a adighi adi nma dika ihe ngwọta, ma o nwere uru ya.
Ya mere, a pụrụ itinye ya n'ọrụ, nke dị mfe. Ma ya nke kwesịrị ekwesị maka akpụkpọ anụ na akọrọ.
Isi ihe bụ iji nlezianya dozie akpụkpọ ahụ n'ihu itinye mmanụ otite.
N'ezie: Izu 3.
Ugboro ole n'ụbọchị: tinye aka na akpụkpọ ahụ dị ọcha 1 oge n'ụbọchị.
Ọtụtụ mgbe izu 1 gachara, ị ga-ahụ nsonaazụ. Ọ dịkwa mkpa ka ị buru n'uche na, n'agbanyeghị ụdị ọgwụ ọjọọ, na mbụ, ọnya ọnya ndị dị na akpụkpọ ahụ na-amụba. Mgbe ahụ, a na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọhụrụ, dị ọcha, na site na njedebe nke usoro ahụ, ọ na-enwete anya dị ọcha.
Mmetụta dị njọ na - apụta mgbe:
Ọgwụ ọjọọ. Ugboro ugboro a na-eji ọgbụgbọ, isi ọwụwa, peeling akpụkpọ ahụ. Ọ dị mkpa ka ị gaa n'ụlọ ọgwụ.
Achọpụta akpụkpọ anụ. Ọ na-agụnye ike reddening nke akpụkpọ, ọzịza na itching. Ọ dị mkpa ịsacha ngwá ọrụ ahụ ma hapụ ya.
Ọtụtụ mgbe, na ngwa mbụ, enwere ọkụ ọkụ, nke ahụ gafere.
Iji dozie nsonaazụ ị chọrọ:
Kwado nri gị ma mee ezi ndụ.
Ọ dị mma ikpochapụ ihe ịchọ mma ochie, sponges na brushes, ma gaa na-abụghị ndị comedogenic pụtara.
Site n'oge ruo n'oge, ọnwa 2-3 mgbe njedebe nke usoro ọgwụgwọ acne, ị nwere ike ịlaghachi na ọgwụgwọ a chọpụtara, boric acid.
Mgbochi, ị nwere ike iji ọgwụ ọjọọ eme ihe dị ka:
Akpụkpọ anụ Retinoic.
Na-etinye ha na ọgwụ ndi mmadu - ihe nkpuchi nke ụrọ, badyagi na yist, washings na decoctions nke herbs.
Boric acid eguzobewo onwe ya dịka ngwá ọrụ dị oke ala ma dị irè. Iji ya mee ihe maka ebumnuche ya nwere ike na oge dị mkpirikpi iji kpochapụ akpụkpọ ụkwụ na ihe otutu. Enwere ike iji ya na ya na ọgwụ ndị ọzọ iji na-agwọ anụ ahụ. Otú ọ dị, ọ bụ n'ihi nsị nke ngwá ọrụ ahụ ka a ga-etinye n'ọrụ nke ọma ma nyochaa ahụ ike ha.
Mkpụrụ vaịn dịgasị iche iche "Sensation"
Gịnị mere anyị ji achọ ọdụ maka ehi na ihe ọ pụtara mgbe ọ na-eburu ha
Foto na nkọwa nke mushrooms nke Crimea
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Aro maka ojiji nke boric acid site na otutu